Kamalky Laureano dia mampiseho ny fitiavany amin'ny antsipiriany amin'ny sanganasany | Famoronana an-tserasera
Kamalky Laureano dia mpanakanto mandinika amin'ny antsipiriany hitondra azy amin'ny ambaratonga avo indrindra. Ity dia azo jerena amin'ny sary tsirairay izay zaraintsika etsy ambany ary izany dia mihoatra ny famonoana talenta lehibe ananan'ny mpanao hosodoko iray ao amin'ny tanànan'ny Mexico City, na dia avy amin'ny Repoblika Dominikanina aza izy.
Handray ny sanganasany sasantsasany izahay mba hanasongadinana ny ambaratonga avo lenta amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Amin'ny ny sary rehetra sy ireo faritra amin'ny vatana manao ahoana ny famoronany. Ny fahaizany lehibe dia ny mampiasa lamina feno antsipirihany ho an'ny firafitry ny hoditra sy ireo singa hafa izay tena zava-dehibe amin'ny famoronana.
Ny mason-koditra na ny volon-koditra dia tena misy tokoa misavoritaka mora foana ho an'izay mpijery mijery ny sanganasan'i Laureano rehetra. Azontsika atao ny mankasitraka haingana ny fotoana nandaniany ny sasany tamin'ireo sanganasa ireo.
Ary araka ny nambarany manokana dia a liana amin'ny lamina saro-pantarina ary ireo "fipoahana raharaha" izay miafara amin'ny famaritana ny ampahany amin'ny sangan'asany. Na dia tsy mijanona amin'ny antsipiriany aza ny zava-drehetra, fa ny fifangaroan'ny sangan'asany ihany koa dia ampahany lehibe amin'ny lazany ao amin'ny tambajotra sosialy toa an'i Instagram.
Miresaka momba izany isika ny fihetsem-po ao amin'ireo sary hosodoko tsirairay ireo mba hampitana hafatra sy angovo amin'ny fijeriny sy ny toeran'ny sasany amin'ireo maodeliny. Voatonona Instagram, azonao atao ny manaraka ny asan'ity artista Dominikana ity 35 taona izay misy mpanjohy maherin'ny 80.000.
Fanendrena tsy azo ihodivirana raha mpankafy an'ity karazana ity ny iray saripika be loatra izay misy antsipirihany ny zava-drehetra ary izay ahafahan'ny fihetseham-po ampitaina amin'ny endrik'ireo modely afaka mamono antsika indraindray.
Manararaotra manao izany izahay miverina amin'ny hyperrealism an'i Kei Meino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sarin'i Kamalky Laureano amin'ny antsipiriany
Wacom dia mandefa Cintiq vaovao vonona ho an'ny mpianatra tanora kanto sy mpamorona